Reglan : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Reglan ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Reglan® သည် အစာခြေလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းမှ ကြွက်သားများကျုံ့ဆန့်ခြင်းအားတိုးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစာအိမ်မှအစာများအူထဲသို့ အမြန်ပို့လွယ်စေသည်။
Reglan®ကိုအစာအိမ်မှအစာရေမျိုပြွန်သို့ အစာပြန်တက်ခြင်းကြောင့် ရင်ပူသူများတခြားဆေးများနှင့် မသက်သာလျှင် ရေတိုကုသရန်အတွက် ပေးရပါသည်။
Reglan®ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းတိတိကျကျသုံးစွဲပါ။ များသောအားဖြင့် ၄-၁၂ ပတ်အထိသာသုံးစွဲရပါသည်။ အညွှန်းစာတွင် ပါသမျှကိုသေချာလိုက်နာပေးပါ။
Reglan®ကိုသတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက် ပိုသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ် ၁၂ ပတ်ထက် ပိုသုံးစွဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။ Reglan® ကိုပမာဏတိုးသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ် အချိန်ပိုကြာကြာသုံးစွဲခြင်းမျိုးကကုရန်မလွယ်သည့် အူလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကို ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအခြေအနေ၏လက္ခဏာများတွင် သင့်နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ မျက်လုံး၊ မျက်နှာ၊ ခြေ၊ လက်များမှကြွက်သားများထိန်းမရအောင် လှုပ်ရှားခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ Reglan® ကိုပိုကြာကြာသုံးစွဲလေလေ ပြင်းထန်သည့်လှုပ်ရှားမှုမူမမှန်သည့်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်လေလေပင်။ ဖြစ်နိုင်ချေသည် အမျိုးသမီး၊ ဆီးချိုသာမားနှင့် အသက်ကြီးသူများတွင် ပိုများ၏။
Reglan®ကိုအစားမစားမီမိနစ် ၃၀ အလိုတွင် သုံးစွဲပါ။ များသောအားဖြင့် အစာမစားမီနှင့် အိပ်ယာဝင်ချိန်တို့တွင် သုံးစွဲရ၏။ ဆရာဝန်မှ သင့်ကိုရင်ပူစေသည့်အစားအသုံးစွဲစားမှသာသုံးစွဲရန် ညွှန်ကောင်းညွှန်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းလိုက်နာပါ။
ဆေးကိုအထူးပြုထားသောချိန်တွယ်ဇွန်း၊ ခွက် ကိုသာသုံးပါ။ အိမ်သုံးဇွန်းများကိုမသုံးရ။ ချိန်တွယ်ခွက်မရှိလျှင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။
Reglan®အမျိုးအစားမတူသည့်ပုံစံများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမသုံးရပါ။ (ဆေးပြားနှင့် ဆေးရည်)
Reglan® (metoclopramide)ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Reglan® (metoclopramide)ကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Reglan® (metoclopramide)ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Reglan® (metoclopramide)အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Reglan အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေရလျှင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ဝန်ယူရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေရစဉ်၌ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးကိုသာသုံးစွဲသုံးရမည်ဖြစ်သည်။
တခြားဆေးများကိုသုံးစွဲနေရလျှင်။ ထိုဆေးများတွင် ဆရာဝန်အညွှန်းမပါပဲ ဝယ်ယူနိုင်သည့်ဆေးများဥပမာအပင်ထွက်ဆေးများနှင့် ဖြည့်စွက်ဆေးများ စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
Reglan®တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် သွေးယိုခြင်းပိတ်နေခြင်း
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် အပေါက်ဖြစ်နေခြင်း
ဝက်ရူးပြန် သို့မဟုတ် တခြားအတက်ရောဂါများ
An adrenal gland အကျိတ် (pheochromocytoma)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Reglan ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသုံးစွဲနှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Bရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသုံးစွဲနှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Reglan ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Reglan® နှင့်ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သည့် အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းတို့ ဖောင်းကြွခြင်းများ ဖြစ်လာပါကဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူရမည်။
ဆေးသုံးစွဲပြီးနောက် ပထမ ၂ ရက်အတွင်းအောက်ပါလက္ခဏာများပေါ်လာသည်ဆိုပါကReglan®ကိုရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းပြရမည်။
လက်နှင့် ခြေထောက် တုန်ယင်လာခြင်း
မျက်နှာတွင် ထိန်းမရသောလှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်လာခြင်း (သွားများဝါနေခြင်း၊ နှုတ်လမ်းလှုပ်ခြင်း၊ မျက်မှောင်ကျုတ်ခြင်း၊ လျှာလှုပ်ခြင်း၊ မျက်တောင်ခဏခဏခတ်ခြင်း၊ မျက်လုံးလှုပ်ခြင်း)
အောက်ပါပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာပါကReglan®ကိုရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြပါ။
ကိုယ်ဟန်ထိန်းခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့တွင် ပြဿနာဖြစ်လာပြီး ကြွက်သားများ ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ခြင်းဆတ်ကနဲလှုပ်ခြင်း
မျက်နှာတွင် Mask တပ်ထားသလိုခံစားရခြင်း
ကြွက်သားများအလွန်တောင့်တင်းခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ မညီခြင်း၊ တုန်ယင်ခြင်း၊ မေ့လဲတော့မလိုခံစားရခြင်း
စိတ်ကျခြင်း၊ သတ်သေချင်စိတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်စေလိုစိတ်များဖြစ်ခြင်း
ထင်ယောင်ထင်မှားမြင်ခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အထိမခံခြင်း၊ ငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရခြင်း
ဖောလာခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် အတက်မြန်ခြင်း
အသားဝါရောဂါ (အသားနှင့် မျက်လုံးများ ဝါခြင်း)
ဂဏာမငြိမ်ခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ မူးခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Reglan နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Reglan® (metoclopramide)သည် သင်အခုသုံးစွဲသုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသုံးစွဲသုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသုံးစွဲသုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသုံးစွဲသုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
Levodopa (Larodopa, Atamet, Parcopa, Sinemet)
Tetracycline (Ala-Tet, Brodspec, Panmycin, Sumycin, Tetracap)
Atropine (Donnatal, နှင့် တခြားဆေးများ), benztropine (Cogentin), dimenhydrinate (Dramamine), methscopolamine (Pamine) သို့မဟုတ် scopolamine (Transderm-Scop)
ဆီးအိမ်နှင့်ဆီးဆေးများဥပမာ -darifenacin (Enablex), flavoxate (Urispas), oxybutynin (Ditropan, Oxytrol), tolterodine (Detrol),သို့မဟုတ်solifenacin (Vesicare)
Bronchodilators ဥပမာ -ipratroprium (Atrovent) or tiotropium (Spiriva)
Irritable bowel ဆေးများဥပမာ -dicyclomine (Bentyl), hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin), သို့မဟုတ်propantheline (Pro-Banthine)
An MAO inhibitor ဥပမာfurazolidone (Furoxone), isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), or tranylcypromine (Parnate)
စိတ်ရောဂါကုဆေးများဥပမာ – chlorpromazine (Thorazine), clozapine (Clozaril, FazaClo), haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa, Symbyax), prochlorperazine (Compazine), risperidone (Risperdal), thiothixene (Navane), နှင့် တခြားဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Reglan နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Reglan® (metoclopramide) က အစားအသုံးစွဲသို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသုံးစွဲ၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Reglan နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Reglan® (metoclopramide)သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဆီးချို (အင်ဆူလင်ပမာဏချိန်ညှိရန် လိုနိုင်ပါသည်။)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Reglan ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Diabetic Gastroparesis (Diabetic Gastric Stasis) နှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများအတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
diabetic gastric stasis ၏ အစောပိုင်းလက္ခဏာများရှိမှသာလျှင် metoclopramideသုံးစွဲဆေးကိုစတင်ရပါမည်။ သို့သော် ပြင်းထန်သည့်လက္ခဏာများရှိနေပါကReglan®ထိုးဆေး (အသားဆေး၊ အကြောဆေး) နှင့် စတင်သင့်သည်။ 10 mgပမာဏကို ၁-၂ မိနစ်ကြာအောင် အကြောထဲသို့မျှင်းထိုးရပါမည်။
Reglan®ထိုးဆေး(metoclopramide injection, USP)ကိုလက္ခဏာများမပျောက်ခင်အထိ ၁၀ ရက်ကြာအောင်ပေးနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သုံးစွဲဆေးပြောင်းပေးရပါမည်။ နောက်ထပ် metoclopramideကိုထပ်ပေးမည်ဆိုပါကသမားတော်သည် အကျိုးအပြစ်များကိုသေချာချိန်ဆပြီးမှ ပေးရပါမည်။
အကြောဆေးသွင်းရာတွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်အထိမျှင်းပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးရပါမည်။ ဆေးကိုကင်ဆာဆေးမသွင်းခင် မိနစ် ၃၀ အလို၌ ပေးရပြီး ၂ နာရီကြာတိုင်းတစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့် ၂ ခါ၊ ၃ နာရီကြာတိုင်းတစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့် သုံးခါ ထိုးရပါသည်။
cisplatinသို့မဟုတ်dacarbazineတို့ကဲ့သို့ အန်စေသည့်ဆေးများကိုတစ်မျိုးတည်းသို့ ပေါင်းပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရပါကပထမ ၂ ခေါက်တွင် ဆေးကို2 mg/kg နှုန်းနှင့်ပေးသင့်၏။ အအန်နည်းသောဆေးများတွင်မူ1 mg/kg နှုန်းနှင့်ဆိုလုံလောက်ပါသည်။
10 mgထက်ပိုပေးရမည်ဆိုပါကReglan®ထိုဆေးကို 50 mL ဖြစ်အောင် ဖျော်ရမည်။
ဖျော်ရသောဆေးရည်မှာSodium Chlorideဆလိုင်းဆေးရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက Reglan®ထိုးဆေးနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီးအေးခဲပြီးသိမ်းပါက ၄ ပတ်အထိအထားခံပါသည်။ Reglan®ထိုးဆေးကို Dextrose 5% ပါ ရေ နှင့်ဖျော်ပါကအာနိသင်ကျသွားနိုင်သည်။ Reglan®ထိုးဆေးကိုဆလိုင်းဆေးရည်၊ Dextrose 5% ပါ ရေ၊ Dextrose 5% ပါ 0.45% ဆလိုင်းရည်၊ Ringer’s ဆေးရည် သို့မဟုတ် Lactated Ringer’sဆေးရည်တို့နှင့် ဖျော်ထားပါကအလင်းနှင့်မတွေ့လျှင် အေးခဲမထားလျှင် ၄၈ နာရီအထိအထားခံပါသည်။ ဆေးဖျော်ရည်များအားလုံးကိုအလင်းနှင့်မထိတွေအောင်ထားပါကပုံမှန်အခြေအနေတွင် ၂၄ နာရီအထိအထားခံပါသည်။
acute dystonic reactions ဖြစ်လာပါက50 mg Benadryl® (diphenhydramine hydrochloride)ကိုအသားဆေးအနေနှင့်ထိုးပါ။ လက္ခဏာများပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ခွဲစိတ်ပြီးသည်နှင့် Reglan®ထိုးဆေးကိုအသားဆေးအဖြစ် ပေးနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန် လူကြီးသုံးပမာဏမှာ 10 mg ဖြစ်သော်လည်း 20 mg အထိသုံးသည်လည်းရှိ၏။
Small Bowel Intubationအတွက ်အကူအညီဖြစ်စေရန်
conventional maneuversနည်းဖြင့် ပြွန်ကိုထိုးရာတွင် ၁၀ မိနစ်အတွင်းအစာအိမ်မှ Pylorus ကို ဖြတ်မသွားနိုင်ပါကဖျော်မထားသောဆေးကိုအကြောဆေးအဖြစ် ၁-၂ မိနစ်ကြာအောင် မျှင်းထိုးရမည်။ တစ်ကြိမ်တည်းသာထိုးရမည်။
အသက် ၁၄ အထက် ကလေးများနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ – 10 mg metoclopramide base
၆-၁၄ နှစ်အရွယ်များ— 2.5 to5mg metoclopramide base ။ အသက် ၆ နှစ်အောက်များ – 0.1 mg/kg metoclopramide base
အစာအိမ်နှင့် အူသိမ်များကိုဓါတ်မှန်နည်းနှင့် စစ်ဆေးရာတွင် အစာအိမ်ရှင်းချိန်ကြာသူများ၌ အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာလျှင် အကြောဆေးအဖြစ် ၁-၂ မိနစ်ကြာအောင် မျှင်းထိုးရမည်။ တစ်ကြိမ်တည်းသာထိုးရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Reglan ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများ၌ အချိုးအစားဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုခြင်းကိုအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သုံးစွဲသုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်၌ စိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Reglan® (metoclopramide)ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုးဆေး၊ metoclopramide hydrochloride 5.0mg in 1.0mL ဆေးရည်
Reglan® (metoclopramide)ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Reglan®. https://www.drugs.com/reglan.html. Accessed July 31, 2017
Reglan®. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-6177/reglan-oral/details. Accessed July 31, 2017